मोडल / सेलिब्रेटी Archives - SYMNetwork
२०७७ आश्विन २६, सोमबार ०५:५८२०७७ आश्विन २६, सोमबार ०५:५८२०७७ आश्विन २६, सोमबार ०५:५८ by RaunakNo Comments
मनोरञ्जन / कला, मोडल / सेलिब्रेटी
नेहा कक्कडले हालै रोहनप्रीत सिंहसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे पुष्टि गरेकी छिन् । नेहाले आफ्नो सम्बन्ध पुष्टि गरेपछि अब आदित्य नारायणले पनि श्वेता अग्रवालसँगको आफ्नो सम्बन्ध पुष्टि गरेका छन् । आदित्यले भारतीय सञ्चार माध्यम ई टाइम्ससँगको कुराकानी आफ्नी प्रेमिकाबारे जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘मैले श्वेतालाई फिल्म श्रापितको सेटमा भेटेको हुँ र हामीबीच राम्रो बन्डिङ भयो । त्यसपछि बिस्तारै मेरो श्वेतासँग प्रेम बस्यो । सुरुमा उनी साथी मात्र बन्न चाहन्थिन् किनभने हामी साना नै थियौं र आफ्नो करियरमा केन्द्रीत हुन चाहन्थ्यौं । प्रत्येक सम्बन्ध झैं हाम्रो पनि सम्बन्धमा निकै उतार–चढाव आए । मेरो आमा–बुवालाई श्वेता निकै मनपर्छ । हाम्रो विवाह नोभेम्बर–डिसेम्बरमा हुनसक्छ ।’ आदित्यले थपे, ‘मलाई याद छ कि वर्षौं अघि मेरो र श्वेताको ब्रेकअप भएको छ भनेर मानिसहरुले अनुमान लगाउन थालेका थिए । त्यस...
२०७७ भाद्र २२, सोमबार १४:५४२०७७ भाद्र २२, सोमबार १४:५४२०७७ भाद्र २२, सोमबार १४:५४ by RaunakNo Comments
कंगना रनौतलाई ‘वाई’ श्रेणीको सुरक्षा दिनेछ मोदी सरकार, कस्तो सुविधा पाउनेछिन् ?
मनोरञ्जन / कला, मोडल / सेलिब्रेटी, हलिउड/बलिउड
साभार: रातोपाटी भारतको केन्द्र सरकारले बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतलाई वाई लेभलको सुरक्षा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । केहि दिन अघि सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युपछि कंगनाले उनी मुम्बईमा आफूललाई सुरक्षित महसुस नगरिरहेको बताएकी थिइन् । केन्द्र सरकारको तर्फबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि कंगनाले ट्वीटरमा देशका गृहमन्त्री अमित शाहलाई धन्यवाद दिएकी छिन् । कंगनाले भनिन्, ‘यो प्रमाण हो कि अब कुनै देशभक्त आवाजलाई कुनै फासीवादीले कुल्चन सक्दैन । म अमित शाहजी प्रति आभारी छु । उनले चाहेको भए मलाई केही दिन पछि मुम्बई आउने सल्लाह दिन्थे तर उनले भारतकी एक छोरीको वचनको मान राखे, हाम्रो स्वाभिमान र आत्मसम्मानको लाज राखे, जय हिंद ।’ कंगना रनौतलाई ‘वाई’ श्रेणीको सुरक्षा दिनेछ मोदी सरकार, कस्तो सुविधा पाउनेछिन् ? केन्द्र सरकारको यो निर्णय शिवसेना सांसद संजय र...
२०७७ भाद्र ८, सोमबार ०५:०४२०७७ भाद्र ८, सोमबार ०५:०४२०७७ भाद्र ८, सोमबार ०५:०४ by RaunakNo Comments
संचिता लेख्छिन्–‘प्रेम गरे प्रेम मिल्छ, घृणा गरे घृणा मिल्छ’
नेपाली चलचित्र, मनोरञ्जन / कला, मोडल / सेलिब्रेटी
Credit: OnlineKhabar Advertisement नेपाली महिलाहरुको महान् पर्व तीजको अवसरमा नेपाली चलचित्रका नायिकाहरु पनि ब्रत बसिरहेका छन् । विवाहित र अविवाहित नायिकाहरु राती सारीमा सजिएका छन् । नायिका संचिता लुइटेल पनि तीजको दिनमा ब्रत बसेकी छिन् । उनै, संचिताले सामाजिक संजालमा मनको भावना लेख्दै सबैसँग प्रेम र विश्वा बाड्न आग्रह गरेकी छिन् । संचिता लेख्छिन्–‘जे रोप्यो त्यही मिल्छ । श्रद्धा गर्यो श्रद्धा मिल्छ, विश्वास गर्यो विश्वास मिल्छ । प्रेम गर्यो प्रेममिल्छ, घृणा गर्यो घृणा नै मिल्छ ।’ उनले, प्रेम, विशवास र श्रद्धा छर्न सर्बसँग अपिल गर्दै तीजको शुभकामना दिएकी छिन् । चलचित्रको पर्दाबाट केही समयदेखि टाढा देखिएकी नायिका संचिता लुइटेल चलचित्र ‘आयो भैरव’मा काम गर्ने तयारीमा थिइन् । तर, लकडाउन र कोरोना भाइरसका कारण चलचित्रको काम रोकिएको छ । ...